A na -enyocha onyonyo nke Nokia 8 nwere ike, ọkọlọtọ nke afọ a | Androidsis
Naanị taa n'ụtụtụ a anyị enwewo ike ịmata ekele a vidiyo nke Nokia n'onwe ya bipụtara na ibe Facebook ya, na na MWC 2017 ha ga -akpọsa ọtụtụ ekwentị karịa ka a tụrụ anya ya, ebe ọ bụ na mbụ a tụrụ anya na ọ ga -abụ Nokia 6, ewepụtara na ngwụcha izu gara aga na China.
Ugbu a usoro onyonyo ọzọ apụtala nke nwere ihe gbasara Nokia 8, nke ekwesịrị ga -abụ ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ maka afọ a, yabụ atụmanya dị elu. Foto ndị a abụghị nke kacha mma, mana ị nwere ike nweta ọtụtụ ozi n'aka ha.
A mara flagship Nokia a dị ka P1 ruo ugbu a, mana ịmara mmalite mmalite nke Nokia 6, nke a na -akpọ Nokia 8 ga -ekwe omume.
Otu onyonyo dị otu a nke ekwuru na Nokia 8 na -egosi nke ahụ enweghị bọtịnụ anụ ahụ dị n'ihu, yabụ na ha ga -abụ ndị mebere ihuenyo maka ijikwa ụlọ, azụ na nso nso a. Banyere imewe, amachaghị banyere P1, na -abụghị ihe ga -abụ ngwụcha ọla na nchekwa IP68 maka mmiri na uzuzu.
Ihe onyonyo a agbapụtara na -ebute anyị ụzọ otu ihe ahụ metal imecha, yabụ, ihe niile na -eso ihe akwadoro maka otu atụmatụ ahụ. Foto ndị ọzọ na -egosi igwefoto n'azụ, nke e ji modul okirikiri mara nke na -adị ka ịwụnye ọkụ ọkụ abụọ. Igwefoto nwere ike ịnwe 24 MP nwere nkwụsi ike onyonyo na Super elektrọn. Ekwenyere na anyị nwere ike hụ Carl Zeis optics, nke amaara nke ọma n'oge ahụ iji were Nokia ochie see foto dị egwu.
Eziokwu ọzọ na -achọ ịmata bụ akara HRM edere na modul igwefoto, nke ga -adịgide Mkpebi dị elu Monochromatic ma ọ bụ monochrome mkpebi dị elu. Enwere ike iji igwefoto nke abụọ were weghara data monochrome na Huawei P9.
N'ihe nkọwa, ị nwere ike ịtụkwasị obi na a 5,7 display Quad HD Super AMOLED ngosi, Snapdragon 821 mgbawa na 2.0GHz ma ọ bụ 825 na 4 ma ọ bụ 6 GB nke Ram. Nchekwa ahụ ga -eru 644 ma ọ bụ 128 GB, gbakwunyere ihe ga -abụ igwefoto n'ihu 12MP.
Anyị kwuru na ị ga -ewere onyonyo na akụkọ ndị ahụ dị ka asịrị maka ihe ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe onyonyo ndị a nwere ike ikpughe ọkwa nke Nokia maka 2017, Nokia 8.
N8 super gbara akwụkwọ yana ya na android? Mmmmmmmmmm
Adobe chọrọ ka ị jiri iwu olu dezie foto